Android Phoneက ဖိုင်တွေကို အမြန်ဆုံးရှင်းလင်းနည်းများ ~ The ICT.com.mm Blog
အသုံးပြုတာ ကြာလာတာနဲ့အမျှ သင့် Android Phone မှာ Apps, Photos, Media တွေ အပြင် Uninstall လုပ်လိုက်တဲ့ Apps တွေကျန်ခဲ့တဲ့ အမှိုက်ဖိုင်တွေနဲ့ ပြည့်လာပါတယ်။ ဖုန်းမှာ နေရာပြည့်လာရင် Flash Memoryရဲ့Write Performance ကျဆင်းလာတဲ့အတွက် ဖုန်းက လေးလံ နှေးကွေးလာပါတယ်။ ဖုန်းမှာ မလိုအပ်တဲ့ဖိုင်တွေ၊ Apps တွေကိုရှင်းခြင်းအားဖြင့် ဖုန်းကို ပြန်လည် မြန်ဆန်အောင် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
အမြန်ဆုံးနည်းကတော့ Factory Reset ချပါ။
Factory Reset ချရင် Apps, Files တွေကို ဖျက်ပစ်မှာဖြစ်ပြီး သင့်ဖုန်းကို စက်ရုံထုတ်အတိုင်း လျှင်လျှင်မြန်မြန်နဲ့ အသုံးပြုလို့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ဖုန်းက Contacts, Emailsနဲ့ တစ်ခြားဒေတာတွေကို Google Accountနဲ့ Sync လုပ်ထားရင် ပြန်ပြီး အသုံးပြုလို့ရမှာပါ။ တစ်ခြား Sync Feature ပါရှိတဲ့ Apps တွေမှာလည်း Sync လုပ်ခြင်းဖြင့် ဒေတာတွေကို ပြန်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Google Play Store က ၀ယ်ထားတဲ့ Apps တွေကိုလည်း ပြန်ပြီး ဒေါင်းလုပ် လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Text Messages, Photos, Music, Video စတာတွေကို ကွန်ပြူတာမှာ သိမ်းနိုင်သလို Dropbox, GoogleDrive တို့လို Cloud Storage တွေမှာ သိမ်းနိုင်ပါတယ်။ Angry Birds, Cut the Rope တို့လို Game Progress တွေကိုတော့ သင်ဆုံးရှုံးမှာပါ။ Factory Reset ချဖို့အတွက် Settings ထဲက Backup & Resetမှာ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ဖုန်းဟာ Root လုပ်ထားရင် Titanium Backup လို App ကိုသုံးပြီး App Data တွေကိုပါ သိမ်းထားနို်င်ပြီး Factory Reset ချပြီးရင် ပြန်သုံးနိုင်ပါတယ်။
Apps တွေကို Uninstall လုပ်ပါ။
အသုံးမပြုတဲ့ Apps တွေကို Uninstall လုပ်ပါ။ Settings ထဲက Apps ကိုသွားပြီး အသုံးမပြုတဲ့ Apps တွေကို Uninstall လုပ်ပါ။ Android 4.0 မှာဆိုရင် App ကို ဖိထားပြီး Drag & Drop လုပ်ပြီး Uninstall လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဖိုင်ဆိုက်ကြီးတဲ့ Apps တွေကို ရွေးချယ်ဖြုတ်ချင်ရင် Settings ထဲက Apps ထဲသွားပြီး Downloaded tab ကိုနှိပ်ပါ။ Menu ကိုနှိပ်ပြီး Sort by size ကိုနှိပ်ပါ။ ဒါဆိုရင်ဖိုင်ဆိုက်ကြီးတဲ့ Apps တွေကို ကြီးစဉ်ငယ်လိုက် တွေ့မြင်နိုင်ပြီး ဖြုတ်နိုင်ပါတယ်။
Settings ထဲက Storage မှာ သင့်ဖုန်းမှာ နေရာယူထားတဲ့ ဖိုင်တွေကို Category အလိုက် ပြပေးထားပါတယ်။ နေရာယူထားတဲ့ Space ကိုလည်း Category အလိုက် တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။
Category တစ်ခုချင်းစီကို ရွေးချယ်ပြီး ဖိုင်တွေကို ရှင်းလင်းနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် Pictures, Videos ကိုရွေးချယ်ရင် Gallery App ပွင့်လာမှာဖြစ်ပြီး Pictures, Videos တွေကို ရှင်းနိုင်ပါတယ်။ Gallery App က Google+ Photos တွေကိုပါ ပြပေးနိုင်ပါတယ်။
တစ်ခြား Category တွေဖြစ်တဲ့ Audio, Downloads, Cached data, Misc စတာတွေကိုလည်းရှင်းလင်းနိုင်ပါတယ်။ Downloads ကိုနှိပ်ရင် Downloads Appကို ဖွင့်ပေးမှာဖြစ်ပြီး Download လုပ်ထားတဲ့ ဖိုင်တွေကို ရှင်းနိုင်ပါတယ်။ Cached data and Misc မှာ Apps တွေရဲ့ ဖိုင်တွေကို ပြပေးပါတယ်။ အဲဒီ Category အားလုံးက ဖိုင်တွေကို ရှင်းလင်းပြီး Free Space တွေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဖိုင်တွေကို ရှင်းလင်းဖို့အတွက် အသုံး၀င်တဲ့ DiskUsage app ကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒီ App က ဖိုင်တွေ၊ ဖိုဒါတွေကို Graphical Overview အနေနဲ့ ပြပေးနိုင်ပြီး သင့်ဖုန်းမှာ နေရာအများဆုံး ယူထားတဲ့ ဖိုင်တွေကို လျှင်မြန်စွာ သိရှိနိုင်ပြီး ရှင်းလင်းနိုင်ပါတယ်။
နောက်နည်းတစ်ခုကတော့ ဖုန်းကို ကွန်ပြူတာနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး ဖိုင်တွေကို ကွန်ပြူတာကို ကူးပါ။ ကွန်ပြူတာကို ကူးပြီးရင်တော့ ဖုန်းမှာ အဲဒီဖိုင် တွေကို ဖျက်ပစ် ပြီးနေရာလွတ်တွေ ရရှိနိုင်ပါပြီ။
အပေါ်ကနည်းတွေကို အသုံးပြုပြီးရင်တော့ သင့်ဖုန်းမှာနေရာလွတ်တွေ ရရှိလာပြီး ဖုန်းကလည်း သင့်အတွက် မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ အလုပ် လုပ်ပေးတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Newer မြန်မာနိုင်ငံမှ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် သစ်သီး၀လံကုန်ချောများ ကိုရီးယားသို့ တင်ပို့မည်
Older LGရဲ့ G2နဲ့ Optimus G Proဆိုရင် ဘယ်ဖုန်းကို ၀ယ်သင့်လဲ?
သင့် Android Phoneကို အသုံးပြုရတာ တစ်ဖြည်းဖြည်း လေးလံနှေးကွေး လာပြီလား? Application တွေကို ဖွင့်တဲ့အချိန်တွေ၊ Applicationတစ်ခုနဲ့ တစ်ခု...
Android OSဆိုတာ သင့်စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲပြီး အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Mobile Operating Systemတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို အသုံးပြုဖို့ အတွက်တေ...
စမတ်ဖုန်းတွေကို နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာ စမတ်ဖုန်းလောကထဲမှာ အကောင်းဆုံးဟုဆိုရမည့် Android ဖုန်းကို ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။ Android ဖုန်းတွေ နှိုင...